ထူးခြားဆန်းပြား Archives » Myanmar Family Life
Idol မင်းသားကြီးရဲ့ ပုံကို တက်တူးထိုးပြီး အားပေးကြမ်းခဲ့တဲ့ မြန်မာပရိသတ်တစ်ဦး
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပြာဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့နိုင်ငံကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မိန်းကလေး အပြာသရုပ်ဆောင် အင်အားများပြားနေပေမယ့် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် အင်အားကတော့ နည်းပါးလျက် ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဂျပန်ကတုံးလို့ လူသိများလှတဲ့ အပြာမင်းသားကြီး Mitsugu Somezima ဟာ မင်းသမီးတွေ တစ်လက်ပြီးတစ်လက်နဲ့ ကာရိုက်တာပေါင်းစုံကနေ အပြာဇာတ်ကားများကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
အပြာမင်းသား ရှားပါးလှတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ မင်းသားကြီးဟာ တစ်ပတ်ကို ယမ်း 2,800,000 ခန့် ဝင်ငွေရှိသူဖြစ်ပြီး ဂျပန်ပွန်းစတား လောကမှာတော့ ဘုရင်တစ်ဆူလို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။အသက် ၁၆နှစ် အရွယ် ကတည်းက အပြာဇာတ်ကားတွေကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အသက် ၁၈နှစ် အရွယ်မှာတင် အပြာမင်းသမီးပေါင်း ၇၅၀၀ နဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့ပါပြီ။မြန်မာပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ ဂျပန်မင်းသားကြီးဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာလည်း နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ ပရိသတ်တစ်ဦးဆိုရင် သူ့ရဲ့ပုံကို တက်တူးထိုးထားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပရိသတ် တစ်ဦးက သူ့ရဲ့ပေါင်မှာ တက်တူးထိုးပြီး” မင်းအိမ် ရေပိုက်လာပြင်ပေးရမလား ? ” ဆိုတဲ့စာသားလေး နဲ့ တက်တူးထိုးပြီး အားပေးကြမ်းထားတာပါ။မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးကလည်း ဂျပန်ကတုံး ကို အားပေးကြမ်းပြီး တက်တူးထိုးထားတဲ့ မြန်မာ ပရိသတ်အကြောင်းကို သိရလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရူပေးကြတဲ့ မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ထိုင်းနိုင်ငံ နာခွန်စီသမာရတ် စီရင်စုတွင် အမျိုးသားတစ်ဦး သရက်သီးတက်ခူးရာမှ သရက်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး မြေပြင်ရှိ ကွန်ကရစ်သံချောင်းပေါ်ကျကာ ငယ်ပါ(ဝှေးစေ့)ကို ဖောက်ထွင်းစိုက်ဝင်မှု မနေ့က နေ့လည်းပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
‘ပီရန်ပေါင်း’ အမည်ရှိတဲ့ အမျိုးသားဟာ ဝေဒနာမချိမဆံ့ခံနေရပြီး သရက်ပင်အောက်မှာ လဲကျနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေက အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မလာခင်မှာ သူသတိလစ်မမေ့မြောသွးအောင် ဆားခဲကို အနံ့ရှုခိုင်းပြီး ပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရောက်လာပြီး သူကိုဆေးရုံပို့ဖို့အတွက် သံချောင်းကို သံဖြတ်စက်နဲ့ နားနားပြီး ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သံဖြတ်စက်ကြောင့် စိုက်ဝင်နေတဲ့ သံချောင်းရဲ့ တုန်ခါမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်ပဲ သုံကြိမ်သုံးခါ တိုင်တိုင် သတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆေးရုံကို တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ‘ပီရန်ပေါင်း’ ဟာ ငရုတ်သီးဆွတ်နေစဉ် သရက်ပင်ပေါ်က သရက်သီးကိုတွေ့ကာ တက်ခူးစဉ် ပြုတ်ကျပြီး သူ့ရဲ့ဝှေးစေ့ကို ကွန်ကရစ်သံချောင်း စိုက်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
သရကျပငျပျေါက ပွုတျကကြာ ဝှေးစကေို့ ကှနျကရဈသံခြောငျး ဖောကျဝငျ
ထိုငျးနိုငျငံ နာခှနျစီသမာရတျ စီရငျစုတှငျ အမြိုးသားတဈဦး သရကျသီးတကျခူးရာမှ သရကျပငျပျေါကပွုတျကပြွီး မွပွေငျရှိ ကှနျကရဈသံခြောငျးပျေါကကြာ ငယျပါ(ဝှေးစေ့)ကို ဖောကျထှငျးစိုကျဝငျမှု မနကေ့ နလေ့ညျးပိုငျးက ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။
‘ပီရနျပေါငျး’ အမညျရှိတဲ့ အမြိုးသားဟာ ဝဒေနာမခြိမဆံ့ခံနရေပွီး သရကျပငျအောကျမှာ လဲကနြတောကိုတှရေ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးတှကေ အရေးပျေါကယျဆယျရေးအဖှဲ့မလာခငျမှာ သူသတိလဈမမမွေ့ောသှးအောငျ ဆားခဲကို အနံ့ရှုခိုငျးပွီး ပွုစုခဲ့ကွပါတယျ။
ကယျဆယျရေးအဖှဲ့ရောကျလာပွီး သူကိုဆေးရုံပို့ဖို့အတှကျ သံခြောငျးကို သံဖွတျစကျနဲ့ နားနားပွီး ဖွတျခဲ့ကွပါတယျ။ သံဖွတျစကျကွောငျ့ စိုကျဝငျနတေဲ့ သံခြောငျးရဲ့ တုနျခါမှုဒဏျကို မခံနိုငျပဲ သုံကွိမျသုံးခါ တိုငျတိုငျ သတိလဈသှားခဲ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးမှာတော့ ဆေးရုံကို တငျပို့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ‘ပီရနျပေါငျး’ ဟာ ငရုတျသီးဆှတျနစေဉျ သရကျပငျပျေါက သရကျသီးကိုတှကေ့ာ တကျခူးစဉျ ပွုတျကပြွီး သူ့ရဲ့ဝှေးစကေို့ ကှနျကရဈသံခြောငျး စိုကျဝငျခဲ့တာဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။
တစ်ပတ်အတွင်း တစ်ညတစ်ယောက်နှုန်းနဲ့ အမျိုးသား ခုနစ် ​ယောက်​နဲ့ တွဲခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး ……..
အချိန် ၇နှစ်ကြာအိမ်ထောင်ရေး ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Nadia Bokody ဆိုသူ သူမဟာ လ အတော်ကြာ ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ လိင်မှုကိစ္စကို ဆန္ဒပြင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံသူ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေက တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးက သူမကို အကြံတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ သူမ လိုပဲ ပျော်ပါးချင်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးဦးကို မက်ဆေ့ခ်ျပြီး အပျော်တမ်း ချိန်းတွေ့ကြည့်ဖို့ပါပဲ။
Nadia လည်း အဲဒီ့အကြံဉာဏ်ကို ယူပြီး သူမနဲ့ အရင်က ချိန်းတွေ့ခဲ့ဖူးသူ Ryan ကို လှမ်းဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။Ryan ကလည်း သူမဆီလာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပြီးကြတော့ Nadia က ဝမ်းသာလွန်းလို့မျက်ရည်တောင်ကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူမ လိုအပ်နေတာ လိင်မှုကိစ္စတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ အခုလို အပြောင်းအလဲအနေနဲ့ အပျော်တမ်းချိန်းတွေ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး လိုနေတာဆိုတာ သိသွားလို့ပါပဲ။
သူမဟာ သဘောခွေ့သွားပြီး တစ်ပတ်အတွင်း တစ်နေ့တစ်ယောက် ချိန်းတွေ့၊ တစ်ညကို တစ်ယောက်ပြောင်းပြီး တူတူနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမ ချိန်းတွေ့ချင်တိုင်း တစ်ယောက်ယောက်ကို မက်ဆေ့ချိပို့လိုက်ရုံပဲမို့ အရမ်းရိုးရှင်းအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်။
စာအပို့ခံရတဲ့ သူအတော်များများကလည်း သူမဆီချက်ချင်းရောက်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် သူမ ချိန်းတွေ့ခဲ့လို့ မတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အတွေ့အကြုံတွေအပြင် သူမဟာ အရင်လိုမဟုတ်ဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေပြီ အားပြည့်တက်ကြွနေတယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုထားပါသေးတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ ကိုရီယားအဆိုတော်ကောင်လေးရဲ့ ဓါတ်ပုံ
အင်တာနက်ပေါ်က ပရိသတ်တွေကတော့ NCT127အဖွဲ့ဝင် Jaehyunရဲ့ ဒီကနေ့မှာ တင်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ အဖြေရှာမရဖြစ်နေပြီး တော်တော်လေးကို ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်။
မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ဒီကနေ့မှာတော့ Jaehyunက Vancouver မှာရှိတဲ့ အပြာရောင်ပင်လယ်ကြီးကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တွစ်တာပေါ်မှာ တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Jaehyunကတော့ သူရဲ့ အရပ်အရှည်ကြီးနဲ့ ပိုစ့်တွေ မျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲက ပုံတစ်ပုံကတော့ တော်တော်လေးကို ထူးထူးခြားခြားကွဲထွက်နေပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Jaehyun ရဲ့ ခြေထောက်ကို ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လက်တစ်ခုက လာကိုင်ထားတာကြောင့်ပါ။ ပရိသတ်တွေကတော့ အဲဒီထူးဆန်းတဲ့လက်က ဘယ်ကလည်းဆိုတာကို အဖြေရှာဖို့အတွက် Jaehyunတင်ထားတဲ့ တွစ်တာပိုစ့်အောက်မှာပဲ ကွန်းမန့်တွေ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ Jaehyunကလည်း ပရိသတ်တွေပြောတော့မှာ သူရဲ့ ဓါတ်ပုံက ထူးထူးဆန်းဆန်းလက်ကို တွေ့ရှိသွားခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။ “WHAAATT???!!ဒါဘာကြီးလဲ” ဆိုပြီးတော့ ပြန်လည် ကွန်းမန့်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အင်တာနက်ပရိသတ်တွေကြားမှာ အဲဒီထူးဆန်းတဲ့ လက်ကဘယ်လဲဆိုတာကို တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရော အဲဒီလက်က ဘာလို့ ထင်ကြလဲ။
အငျတာနကျပျေါက ပရိသတျတှကေတော့ NCT127အဖှဲ့ဝငျ Jaehyunရဲ့ ဒီကနမှေ့ာ တငျလိုကျတဲ့ ဓါတျပုံတှကေို ကွညျ့ပွီးတော့ အဖွရှောမရဖွဈနပွေီး တျောတျောလေးကို ထိတျလနျ့သှားခဲ့ရပါတယျ။
မလေ ၂၀ ရကျနေ့ ဒီကနမှေ့ာတော့ Jaehyunက Vancouver မှာရှိတဲ့ အပွာရောငျပငျလယျကွီးကို နောကျခံထားပွီး ရိုကျထားတဲ့ ဓါတျပုံတှကေို တှဈတာပျေါမှာ တငျပေးခဲ့ပါတယျ။ Jaehyunကတော့ သူရဲ့ အရပျအရှညျကွီးနဲ့ ပိုဈ့တှေ မြိုးစုံလုပျပွီးတော့ ဓါတျပုံတှေ ရိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဓါတျပုံတှထေဲက ပုံတဈပုံကတော့ တျောတျောလေးကို ထူးထူးခွားခွားကှဲထှကျနပေါတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ Jaehyun ရဲ့ ခွထေောကျကို ဘယျကမှနျးမသိတဲ့ လကျတဈခုက လာကိုငျထားတာကွောငျ့ပါ။ ပရိသတျတှကေတော့ အဲဒီထူးဆနျးတဲ့လကျက ဘယျကလညျးဆိုတာကို အဖွရှောဖို့အတှကျ Jaehyunတငျထားတဲ့ တှဈတာပိုဈ့အောကျမှာပဲ ကှနျးမနျ့တှေ ရေးသားခဲ့ကွပါတယျ။ Jaehyunကလညျး ပရိသတျတှပွေောတော့မှာ သူရဲ့ ဓါတျပုံက ထူးထူးဆနျးဆနျးလကျကို တှရှေိ့သှားခဲ့တဲ့ပုံပါပဲ။ “WHAAATT???!!ဒါဘာကွီးလဲ” ဆိုပွီးတော့ ပွနျလညျ ကှနျးမနျ့ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အငျတာနကျပရိသတျတှကွေားမှာ အဲဒီထူးဆနျးတဲ့ လကျကဘယျလဲဆိုတာကို တျောတျောလေး စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ ပရိသတျတှရေော အဲဒီလကျက ဘာလို့ ထငျကွလဲ။